July Dream: The Chinese Valentine's Day
Posted by JulyDream at 10:33 PM
ကဲကဲ ပုံပြင်ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ကိုဂျုလိုင်ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်ကောင်မလေးရေချိုးတာ ချောင်းကြည့်ခဲ့ပြီး အ၀တ်အစားတွေ တိုထားလို့ ဘာတွေဆက်လုပ်တယ် ဆိုတာလေး ပြောပါဦး :P
ဗျာ... ကိုလပိစိကွေး (ကလေးအဖေ ပူပူနွေးနွေးကြီး)...
ကောင်မလေးတွေ ရေချိုးတာကို ဘယ်နားကနေ ဘယ်လို သွားချောင်းရမယ်တောင် မသိသေးပါဘူးဗျာ။ သူတို့ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို တိုဖို့ကတော့ ဝေးပါသေးတယ်။ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကိုလကလေးတို့လို့ အတွေ့အကြုံရှိ ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှုးတွေ ပြောပြ သင်ပေးမှ သိရမယ့် ဘ၀လေးပါ ခင်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် July Dream ရေ... ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းကရော အရေးအသားကပါ တကယ် ကောင်းပါတယ်။
Astronomy guide for those who want to look through the sky with telescope...
牛郎星 (Altair, brightest star of Aquila constellation) represents the man. The two stars (Aquila -β and -γ) at Altair's side represents the two children.
织女星 (Vega, brightest star of Lyra constellation) represents the heavenly fairy.
Cygnus constellation represents the 鹊桥 ('magpie bridge') across the 银河 (Milky Way).
For those who want to know more about 七夕 ('The Night of Sevens'), you may want to read the story of Cowherd and Weaver Girl
ဒီပုံပြင်ကို ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ် ဗယ်လင်တိုင်းမှန်း မသိဘူး။ အခုမှ သိရတာ။
ကျွန်တော့် အရေးအသားက ပုံမှန်ပဲခင်ဗျ။ တခါတလေ စာတွေ ထွေးနေမှာတောင် စိုးနေရတယ်။
အခုလို ထပ်ဆင့် ဝေမျှတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့။ ဒီပုံပြင်လေးက တရုတ်ချစ်သူများနေ့ နောက်ခံ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။